Tsaradia - Air Madagascar Niverin-dalana ny sidina hihazo an’i Toliara
Nanana olana ara-teknika ny zotram-piaramanidin’ny Air Madagascar avy eo Ivato hihazo an’i Toliara, ny faran’ny herinandro teo.
Niverina an-dalana ity zotra ana habakabaka ity fa tsy tonga tany amin’ny tanin’ny masoandro, raha ny loharanom-baovao azo antoka. Raha ny fanambaran’ireto farany hatrany araka ny tatitr’ireo mpandeha, efa 36 minitra taorian’ny fiaingana vao nitodi-doha nihazo ny seranam-piaramadina iraisam-pirenena Ivato indray ny sidina. Tsy afaka nipetraka avy hatrany anefa noho ny olana hafa ivelan’ny zotra izay heverina fa mety noho ny fitangoronan’ny rahona tamin’ny andro nanjombona ny faran’ny herinandro teo na koa ny tendrombohitra fa voatery nihodina. Efa tsembo-dratsy sy velon-tahotra tanteraka ireo mpandeha. Noho ny fahaizan’ny mpanamory sy ny fitoniany ary ny hakingany, tafapetraka soamantsara ny voromby ary tsy nisy ny naratra sy ny aina nafoy. Raha nanontaniana ny mpandray findain’ny kaompania Air Madagascar mpikarakara mpandeha dia nilaza fa nisy tokoa io fanafoanana sidina io. Nasainy naka fanampim-
baovao misimisy kokoa tamin’ny Tsaradia izay mpiandraikitra ny zotram-pitaterana eto an-toerana. Saingy ny mpandrindra ny mpandeha ihany koa no tratra antso, noho ny andro tsy fiasana hatramin’ny omaly nanoratana ny vaovao. Nilaza izy fa ny mpiandraikitra ao amin’ny foibe na ny mpanamory no tena mahalala izany. Niezaka niantso an-tariby ireo manampahefana sy tompon’andraikitra teny amin’ny seranana ihany koa fa tsy nisy vaovao nipika. Tranga mety mpiseho ny toy izao fa mitoetra ho zava-dehibe amin’ireo mpandeha sy mpanara-baovao ny avotraina notanterahin’ireo mpanamory.